XyBo: သင်ဘယ်လောက် အလုပ်လုပ်ချင်စိတ် ရှိလဲ
This entry was posted on Monday, August 04, 2008 and is filed under psycho test . You can leavearesponse and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .
ကျွန်တော်ကတော့ သောကြာနေ့ကို တိုးချင်တယ်ဗျာ..ဟဲဟဲ
သောကြာနေ့ကိုပဲ တိုးလိုက်ပါတယ်... :)
အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ရှိသင့်သလို၊ မိသားစုနဲ့နေတဲ့အချိန် လည်းရှိသင့်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်က စနေနေ့ ကိုရွေးချယ်မိတာ ဖြစ်မှာပါ။
ခရစ်ယာန် ကျမ်းစာထဲမှာ ၆ ၇က်အလုပ်လုပ်ပီး ၇ ရက်မြောက်နေ့မှာနားရမယ် ဆိုပီးရေးထားတယ်လေ